Silicon Core Pipe Extrusion Line - China Silicon Core Pipe Extrusion Line Mutengesi, Fekitori -Jwell
Silicon Core Pipe Kubvisa Line
Kuita ＆ Makomborero
Iyo yakasvibirira yesilicoxn yakakosha chubhu substrate ndeye yakakwira-density polyethylene, iyo yemukati rukoko yakashandisa yakaderera kukakavara coefficient silica gel solid lubricant. Iko kurwisa kweengura, inotsvedza yemadziro, yemukati gasi ichivhuvhuta tambo kutapurirana, uye yakaderera kuvaka mutengo. Zvinoenderana nezvinodiwa, hukuru hwakasiyana uye mavara ematubhu madiki anoiswa nekasi yekunze. Izvo zvigadzirwa zvinoshandiswa kune optical cable kutaurirana network system ye
nzira yakasununguka, njanji uye zvichingodaro.
Iyo tambo yekugadzira inogona kuona akawanda epasi pombi panguva imwe chete, kumhanya kusununguka, uye nekukurumidza uye zvakaenzana kufukidza yekunze casing. Synchronous traction, cheka-yakatemwa uye yakapera chigadzirwa coiling inodzorwa nekombuta, ine yakakwira kugadzirwa kumhanya uye kugona.